Eyona nto ibhetele kaJuan Gómez Jurado
Iincwadi zam ezinconyelwe nguJuan Gómez Jurado. Uphengululo olubalulekileyo lwezona zinto zilungileyo zombhali. Iingcebiso zokonwabela imisebenzi yakho enomdla.
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo nguJuan Gómez Jurado
Xa ufuna ukwazi zakutshanje ezivela kuJuan Gómez Jurado, unokuhlala ufumana iinoveli zakhe, eyalelwa ngokolandelelwano lwexesha lokubonakala, APHA. Ukuba kukho umbhali eSpain olwa nzima noJavier Sierra ukubamba iflegi ephakanyiswe phezulu kuhlobo olukhulu lwemfihlakalo, nguJuan ...
I-White King, nguJuan Gómez Jurado
Amabali amnandi okumisa aya kuba mahle xa isiphelo sabo sikwazi ukudibanisa ukuvalwa kwayo yonke into ejijekileyo nengagqitywanga, kodwa ngesimemo esifanayo sokuqikelela. Ungasigweba isiqwenga ngaxeshanye ungakhomba kwinto enokuba ibiyiyo okanye yintoni ...
Ilivo lesela, nguJuan Gómez Jurado
Xa ukuphinda kukhutshwe ezincwadini kukhutshwa kungaphelanga iminyaka eli-10 emva kohlelo lwayo lwantlandlolo, kuyenzeka njengamaqela omculo aphambili, ukuba abalandeli abakhulayo bacele ngaphezulu kokuvelisiweyo. Malunga nohlelo lweplatinam kunye nazo zonke ezi ndlela ...
Ingcuka emnyama, nguJuan Gómez Jurado
Olunye lokuzisola okumbalwa endikufumanisileyo kwabanye babafundi beenoveli zangaphambili zikaJuan Gómez Jurado, uReina Roja yayisisiphelo esivulekileyo, nemibuzo esalindelweyo ngokweendlela ezahlukeneyo ... -ingcuka kwaye mhlawumbi kusekho nemiphetho ...
UReina roja, nguJuan Gómez Jurado
Olona phawu lukhulu kuhlobo lokurhanela kukukwazi kombhali ukugcina ulungelelwano phakathi kwemfihlelo ngokwayo kunye noxinzelelo lwengqondo olukhombisa uloyiko phakathi kokungaziwayo okanye okungalindelekanga. E-Spain, omnye wabo bakwazi ukugcina amabali akhe kwimvumelwano phakathi ...